Nubia Z18 ayaa ka muuqda Geekbench oo ay weheliso qeexitaankiisa muhiimka ah | Androidsis
Nubia, oo ah shirkadda ZTE, waxay umuuqataa inay diyaarineyso calankeeda xiga. Tani waa Nubia Z18, oo ah heer sare oo leh qeexitaanno farsamo oo ballanqaad badan leh, taasina waxay dhawaanahan ka muuqatay Geekbench, oo ah jaan-goyn aan horay ugu ogaanay xog ku saabsan moobilkan.
Liiska Geekbench wuxuu muujinayaa moobil lambarka nambarka 'NX606J', taas oo la rumeysan yahay inay tahay Nubia Z18 oo ku saleysan warar xan adag oo lagu qanco. Taleefan leh nambarka noocaas ah ayaa dhowr bilood ka hor laga arkay AnTuTu, kaas oo sidoo kale shaaca ka qaaday in lagu heli doono in ka badan laba nooc oo midabbo kala duwan ah.
Liistada ayaa muujineysa in qalabka ay ku shaqeynayaan processor Qualcomm's Snapdragon 845, oo loogu talagalay 6GB RAM oo ku shaqeeya nidaamka hawlgalka ee Android 8.1 Oreo. Dhibcaha hal-abuurka ah ee taleefanka ayaa ah 2.344 halka dhibcaha multi-core ay yihiin 8.933, taas oo aad u wanaagsan
Warbixinadii hore waxay muujinayaan in Nubia Z18 uu la imaan doono bandhig leh nashqadeyn heer sare ah. Liiska TENAA ee Nubia NX606J, oo la shaaciyay dhowr maalmood ka hor, wuxuu noo sheegayaa inay soo bandhigi doonto shaashad dhan 5.99-inch oo FullHD ah oo leh 1.080 x 2.160 pixel screen resolution halka processor octa-core uu socdo 2.649GHz.
Liiska TENAA wuxuu kaloo soo jeedinayaa in taleefanka lagu heli doono laba nooc: mid leh 6GB oo RAM ah iyo 64GB oo keyd ah, iyo mid leh 8GB RAM iyo 128GB keyd ah. Sidoo kale taleefanka casriga ah ayaa la filayaa inuu yeesho dareeraha sawirka faraha waxayna ku shaqeysaa awood batari ah oo dhan 3.350mAh.
Oo ay la socdaan Nubia Z18, shirkadda ayaa bilaabi doonta Nubia Z18S. Haa Waayahay taariikhda la sii deynayo weli lama ogaWaxaan rajeyneynaa in taleefanka dhawaan laga bilaabi doono Shiinaha, oo ah wadanka laga heli karo helitaankiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Nubia Z18 ayaa ka muuqda Geekbench oo ay weheliso astaamaheeda muhiimka ah